Christopher Nkunku Oo Go'an Saday Inuu Ka Tago Kooxdiisa, Gunners Oo Fursad Heshay
HomeWararka CiyaarahaChristopher Nkunku oo go’an saday inuu ka tago Kooxdiisa, Gunners oo Fursad heshay
Christopher Nkunku oo go’an saday inuu ka tago Kooxdiisa, Gunners oo Fursad heshay
May 5, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda RB Leipzig ee Christopher Nkunku ayaa lagu soo waramayaa in uu go’aansaday in uu isaga tago kooxda reer Germany xilli lala xiriirinayo kooxaha Arsenal iyo Man United .
24 jirkaan ayaa ku riyaaqay xilli ciyaareedkiisii ​​ugu wacnaa ee kubada cagta, isagoo dhaliyay 31 gool, waxaana uu caawiyay 20 caawin 48 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan, taasoo soo jiidatay dhamaan kooxaha kale ee Yurub.
Leipzig ma rabto inay iibiso Nkunku xagaagan iyadoo Domenico Tedesco uu doonayo inuu xoojiyo kooxdiisa si ay ugu tartanto oo ay ugu tartanto horyaalka Bundesliga xilli ciyaareedka soo socda.
Sida laga soo xigtay The Sun , Premier League ayaa u muuqda mid ay u badan tahay inuu u dhaqaaqo xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska, iyadoo Arsenal iyo Man United la filayo inay ku loolamaan saxiixiisa Newcastle United iyo Manchester City.
Bayern Munich, Paris Saint-Germain iyo AC Milan ayaa sidoo kale la sheegay inay isha ku hayaan helitaanka Nkunku, iyagoo soo jeedinaya in Leipzig ay wajahdo shaqo adag si ay u sii xajisato weerarka.
Tan iyo markii uu ka yimid PSG 2019, Nkunku wuxuu dhaliyay 43 gool wuxuuna u diiwangeliyay 47 caawin 132 kulan oo uu u saftay Leipzig.